Machining Factory, Suppliers - China Machining Manufacturers
Ihe: Cr12 45# akụrụngwa nhazi ígwè: ịkpụ waya, nhazi lathe nkenke chọrọ nke ziri ezi: 0.01mm Gear parallelism chọrọ: 0.02mm ọgwụgwọ elu: ịcha ọkụ, ọgwụgwọ dị elu, ọgwụgwọ agụụ Nrụpụta oke nke ịzụlite: 1. nkenke igwe. 2. nkenke akụrụngwa akụkụ nhazi. 3. Nhazi akụkụ ahụ mapụtara na-abụghị ọkọlọtọ. 4. Ịrụzi akụkụ ndị nwere ọdịdị pụrụ iche. 5. Ngwaike na n'ibu akụkụ nhazi. 6. Ọgwụ dị n'elu nke igwe dị iche iche ...
Nhazi Heatsink dabere na arịrịọ ndị ahịa
Ihe: igwe anaghị agba nchara titanium alloy Nhazi akụrụngwa: nkenke grinder nhazi, CNC nhazi Ezi chọrọ: 0.005mm ọgwụgwọ elu: chrome plating Machining akporo of Raising: 1. nkenke machining. 2. nkenke akụrụngwa akụkụ nhazi. 3. Nhazi akụkụ ahụ mapụtara na-abụghị ọkọlọtọ. 4. Ịrụzi akụkụ ndị nwere ọdịdị pụrụ iche. 5. Ngwaike na n'ibu akụkụ nhazi. 6. Ọgwụgwọ elu nke akụkụ igwe dị iche iche. Na mmepe nke njikwa kọmputa te ...
Ihe: 20# nchara 5052 aluminom Ngwa nhazi: igwe ọka nkenke na ịtụgharị nkenke chọrọ: 0.01mm Parallelism: 0.01mm concentricity: 0.01mm ọgwụgwọ elu: chrome plating, oxidation and blackening Machining wide of Raising: 1. nkenke igwe. 2. nkenke akụrụngwa akụkụ nhazi. 3. Nhazi akụkụ ahụ mapụtara na-abụghị ọkọlọtọ. 4. Ịrụzi akụkụ ndị nwere ọdịdị pụrụ iche. 5. Ngwaike na n'ibu akụkụ nhazi. 6. Ọgwụ dị n'elu nke akụkụ igwe dị iche iche ...
Ihe: SKD11 akụrụngwa nhazi: igwe igwe igwe, igwe igwe nri, igwe na -eji nwayọ nwayọ Ezi chọrọ: 0.005mm ọgwụgwọ elu: nickel plating Machining wide of Raising: 1. nkenke igwe. 2. nkenke akụrụngwa akụkụ nhazi. 3. Nhazi akụkụ ahụ mapụtara na-abụghị ọkọlọtọ. 4. Ịrụzi akụkụ ndị nwere ọdịdị pụrụ iche. 5. Ngwaike na n'ibu akụkụ nhazi. 6. Ọgwụgwọ elu nke akụkụ igwe dị iche iche. Na ubi nke nhazi na n'ichepụta ụlọ ọrụ, w ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Mmiri Efere, Aluminum CNC Machined Parts, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ihe nkedo, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Ngwaahịa niile